Xildhibaan Mahad Salaad “Farmaajo waa inuu Yoweri Museveni ka dalbadaa raali gelin” – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Salaad “Farmaajo waa inuu Yoweri Museveni ka dalbadaa raali gelin”
March 12, 2019 Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay gaaray magaalada Kambaala ee xarunta dalka Uganda waxa uuna kulamo la qaatay Madaxweynaha uu martida u yahay ee Yoweri Museveni.
Farmaajo ayaa la kulmaya Madaxweyne Yoweri Museveni oo laba jeer u gafay Soomaaliya waxaana laga dalbanayaa in uu raali gelin ka dalbada Madaxweyne Museveni maadaama warkiisa aad looga xumaaday.
Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu baaq ugu diray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
“Askari in uu dumar dharbaaxo ama ku qayliyo qof reer Uganda ah waa wax aan laga aqbali karin, waana gaf weyn oo bulshadda ceeb ku ah”,sidaas waxaa hore u yiri Madaxweynaha Uganda balse Xildhibaan Mahad Salaad waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan Karin hadalkaasi.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa kula taliyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo in uu arintaasi kala hadlo dhiggiisa Uganda si aysan u soo laaban hadalada nuucaas ah oo kale.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa laba jeer hadalo gaf ku ah Soomaaliya ka jeediyay magaalada Kambaala ee xarunta dalka Uganda, sidoo kale Shalay ayuu ku hanjabay in Ciidamadiisa uu kala bixi doono Soomaaliya.
Warar ay heshay Kalfadhi ayaa sheegaya in uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Uganda, kaas oo la aaminsan yahay inuu ka dhashay isbadalka Gobalka oo ay hormuud u yihiin hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea.
Wasaaradda Maaliyadda oo dhagax dhigtay Saldhig laga maamulo canshuuraha Soomaaliya